Vaovao - Relay fifandraisana fiarovana sy ny fifandraisana raharaha
Avereno ny fiarovana ny fifandraisana sy ny fifandraisana
Fantatray fa ny fampitàna fifandraisana dia tokony hasiaka kokoa noho ny Mosfet ankapobeny, ny enta-mavesatra dia lehibe kokoa noho ny Mosfet.
Moterazy DC enta-mavesatra DC, valizy DC ary valizy solenoid DC, mihidy ireo switch of perceptual load, hery an-jatony na an'arivony volts ny herinaratra miverimberina ateraky ny fisondrotana dia hifandray amin'ny fiainana hampihena na ho simba tanteraka mihitsy aza. Mazava ho azy fa raha kely ny onja ankehitriny, toy ny rehefa manakaiky ny 1a, ny herin'ny herinaratra miverina dia hiteraka famotsoran-tsofina amin'ny arc dia hitarika ny fifandraisan'ny loto amin'ny oksida vy, izay nahatonga ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana, lasa lehibe ny fanoherana.
Eto raha tsy hiteny isika dia tsy mahomby hatrany ny fampitaovana, miaro isika, mazàna manitatra ny fotoana ampiasana ny fampitana, satria ny fifandraisana dia ny fametrahana karbaona, ny fahanterana, ny tampony ary madio hatrany am-boalohany. Ny fanoherana ny fifandraisana dia hitombo haingana rehefa akaiky ny faran'ny fampitana ny fiainana relay.
Amin'ny ankapobeny eo ambanin'ny maripana sy ny tsindry mahazatra, ny voltatra famaranana diélectric key dia 200 ~ 300V. koa ny tanjontsika amin'ny ankapobeny dia ny mifehy ny herinaratra ambanin'ny 200V na malefaka kely kokoa.
Ny diode mahazatra dia afaka manitatra ny fotoana ialananan'ny fitetezana, ny diode mahazatra ary ny diode zener diode ary tsy misy fiantraikany be amin'ny fotoana miverina. Raha enta-mavesatra inductive izy io. Rehefa misaraka ny fifandraisana, miverina ela kokoa ny fotoana mifindrafindra, ary hampihena ny androm-piainan'ny fifandraisana. Ohatra, ny relay mifandray amin'ny diode amin'ny coil dia mitaky fotoana 9.8ms hamoahana ireo fifandraisana. Miaraka ny diode zener sy diode kely famantarana, dia azo ahena ho 1.9ms. Ny coil dia tsy mifandray amin'ny diode miverimberina famerenana 1.5ms.
Na dia sarotra tantana aza ny enta-mavesatra inductive noho ny enta-mavesatra fanoherana, ny fampiasana fiarovana tsara dia hahatonga ny fampisehoana ho tsara kokoa.
Misy fomba roa ho tena ratsy, aza mampiasa ny.
Eo ambanin'ny enta-mavesatra DC, ny famindrana matetika dia mety hiteraka korontana avo lenta (pitik'afo).
Rehefa mifehy matetika ny valizy DC solenoid valizy na clutch dia mety hitranga harafesina manga-maitso ny fifandraisana. Ny antony mahatonga an'io toe-javatra io dia rehefa ateraky ny EDM (elatra arko elektrika), azota ary oksizena ao anaty rivotra amin'ny fihetsika vokariny.
Tranga famindrana fitaovana
Rehefa mifandray ilay fitaovana dia mitranga ny fifindrana rehefa miempo na simba ny ampahany ifandraisana. Miaraka amin'ny famindrana ny fandehan'ny fotoana, ary na ny trangan-javatra aza dia hiseho etsy ambany. Rehefa afaka fotoana fohy dia hifikitra ireo fifandraisana tsy mitovy.
Matetika ny enta-mavesatra dia miseho amin'ny alàlan'ny aretin-tseranana lehibe (capacitive sy inductive), ny arc vokariny dia hiteraka trangan-javatra miraikitra.
Ho an'ny paikady roa mifikitra ary roa ihany:
Mifandraisa amin'ny fizaran-tany fiarovana sy ny fitaovana famindrana ara-nofo toy ny volafotsy, oksidia volo, tungsten volafotsy na AgCu amin'ny fampiasana fifandraisana.
Amin'ny ankapobeny ny endrika concave dia mipoitra ao amin'ny cathode, ny endrika convex dia hita ao amin'ny anode.